Sacuudiga oo markii ugu horeysay u magaacowday qof Haweeney ah danjiraha u fadhin doono dalka Maraykanka – Walaal24 Newss
Dwladda Sacuudiga ayaa haweenaydii ugu horraysay ee boqortooyadu xil danjirenimo u magacawday, sheegtayna in loo magacaabay Amiiradda Riima Bint Bandar ay noqon doonto danjirahiisa cusub ee dalka Maraykanka.
Danjirada waxay xilkan qabanaysaa xilli adag oo Sucuudigu isku dayeyeyo in uu dejiyo cadhadii heerka caalami ahayd ee ka dhalatay geeridii weriye Jamaal Khaashoqji.
Wax yaabihii ay soo qabatay maxaa laga xasuustaa?
Amiirad Riima tan iyo markii ay ku noqotay magaalada Riyaad 2005-tii, waxay ka shaqaysay xarumaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay labadaba.
Sawiro: Darawal Bajaajle oo caawa lagu toogtay magaladda Muqdisho